Yakachipa Kukanda aruminiyamu chiwanikwa zvikamu fekitori uye vanotengesa | Ouzhan
Aluminium alloy die casting-yakagadzirirwa yakaringana aruminiyamu chiwanikwa kufa kukanda zvikamu
Mamwe maaluminium alloys anogona kurapwa kupisa kuti awane akanaka michina zvivakwa, zvemuviri zvimiro uye ngura kuramba. Ouzhan inogona kugadzirisa aruminiyamu chiwanikwa kufa-vachikanda zvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda uye vanodhirowa. Mashandisiro ayo eminda anonyanya kushandiswa mune zvemagetsi, mota, mota, midziyo yemumba uye mimwe Muindasitiri yekutaurirana, mamwe emhando yepamusoro zvigadzirwa zvealuminium alloy zvine hunyanzvi hwekuita, kunyatsoita, uye kuomarara kwepamusoro zvinoshandiswawo mumaindasitiri ane zvakakwirira zvinodiwa senge hombe ndege nezvikepe. Iko kushandiswa kukuru kuchiri muzvikamu zveimwe michina.
Zvakanakira Ouzhan aruminiyamu chiwanikwa kufa kukanda
- Wide Kudzingwa renji
- Kukanda kune kukwirira kwekukwirira uye kudzika kwepamusoro kukwirisa
- Kubudirira kwepamusoro
- Yakakwira simbi kushandiswa
- Yakakwira kukanda simba uye pamusoro kuomarara
OEM yakagadzirirwa aruminiyamu chiwanikwa kufa kukanda sevhisi-China Shanghai aluminium chiwanikwa kufa kukanda zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakakwira-chaiyo aruminiyamu chiwanikwa kufa-kukanda ine yakatsiga uye yakavimbika mhando inogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuve nechokwadi chakakwana kugadzira kwealuminium alloy kufa-kukanda michina zvikamu. Uye zvakare, iyo aruminiyamu chiwanikwa kufa-vachikanda zvigadzirwa zvinopihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye zvinogona kushandiswa mune dzakasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa inokwikwidzana mutengo masevhisi ealuminium alloy kufa-kukanda zvikamu kune edu akakosha vatengi.
Iko iko kushandiswa kwealuminium alloy kufa-kukanda zvikamu
Hardware zvishongedzo (aruminiyamu chiwanikwa kufa-kukanda) zvinoreva muchina zvikamu kana zvinhu zvakagadzirwa ne Hardware, pamwe nezvimwe zvidiki zvigadzirwa zvehardware. Inogona kushandiswa yoga kana seyamuro.
Zvakadai semidziyo yezvishandiso, zvikamu zvehardware, zvishandiso zvezuva nezuva-zvinoshandiswa, zvekuvaka Hardware, uye zvekuchengetedza zvinhu. Zvizhinji zvidiki zvigadzirwa zvehardware hazvisi zvekupedzisira zvevatengi zvinhu. Asi, iwo anoshandiswa seindasitiri yekugadzira inotsigira zvigadzirwa, semi-apedza zvigadzirwa, uye maturusi anoshandiswa mukugadzira maitiro. Chete chikamu chidiki chezuva nezuva-shandisa zvigadzirwa zvehardware (zvishongedzo) zvishandiso zvevatengi zvakakosha kune hupenyu hwevanhu.
Zvakanakira Ouzhan Aluminium Die Kukanda Service
- Zvese zvakarongeka aruminiyamu chiwanikwa kufa kukanda zvigadzirwa zvinoenderana neyakaomarara mhando kuongororwa.
- Sekureva kwemadhirowa kana masampuli ekugadzira chaiwo aruminiyamu chiwanikwa kufa-kukanda zvikamu.
Pashure: Yakasarudzika yendarira kufa kukanda zvikamu
Zvadaro: Kukanda aruminiyamu chiwanikwa kufa kukanda